The Tricky Master (1999) | MM Movie Store
ဒီကားကို တဈခြို့ က Tricky Brains ဆိုတဲ့ ကား နဲ့ ရောနတေတျ ကွပါတယျ။သဘောတရားတူပမေယျ့ ဇာတျ လမျးက မတူပါဖူး။Tricky ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျ လိမျညာမှု ၊လှညျ့စားမှု ဆိုတဲ့စကားလုံးအရ နှဈကားလုံးက လိမျညာလှညျ့စားတဲ့ဇာတျ ကားတှပေါ။
၁၉၉၉ ခုနှဈ ၈ လပိုငျး ၅ရကျနမှေ့ာ ထှကျရှိခဲ့ ပွီးBox Office ကတော့ HKD ၁၉ မီလီယံကြျော ရရှိခဲ့ပါတယျ။Imdb Rating လဲ 5.8 ရရှိထားတဲ့ ၂၀၀၀ မပွညျ့မှီ ခြောငျရဲ့နောကျဆုံးကားလို့ဆိုရပါမယျ။၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈကြျောပွီးကထဲက Chow ရဲ့ ဇာတျကားတှအေလှနျနညျးပါတယျ။
KungFu Hustle , Shaloin Soccer, Cj7စတဲ့ဇာတျကားတှမှော ပဲ ခြောငျဟာ အကှကျစိတျပါဝငျပွီး ကိုယျတိုငျပါဝငျခွငျ နညျးပါးလာပါတယျ။
ခေါငျးစဉျအတိုငျးTricky Master (လှညျ့စားဆရာကွီး) Chow ကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပွီး Nick Cheung ( နဈ ခနျြး ) ဆိုတဲ့ မငျးသား တဈယောကျ နဲ့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။-ထောငျကထှကျလာတယျ့ လှညျ့စားဘုရငျ ခြောငျ။(Chow)
-အမှု လိုကျရာမှာ ကြှမျး ကငျြမှု မရှိ ပဲ အလှဲ အမှား ဖွဈတဲ့ သူ့ရဲ့ ယောကျဖ(ရဲဝနျထမျး)။(Nick cheung)-ယောကျဖရဲ့ အမှု တှေ ကို လှညျ့စားနညျးပညာတှနေဲ့ ဘယျလို အကူညီပေးမယျ? လှညျ့စားနညျးတှဘေယျလိုသုံးပွီး ဘယျလို အနိုငျယူ မယျဆိုတာတှကေို ကွညျ့ရမှာပါ။
ဒီကားမှာဆိုရငျ ခြောငျရဲ့ Tricky Brains ကားထဲကလို လှညျ့စားတတှကို တှရေ့မယျ ။Gamblers Series ထဲကလို ဖဲ လောငျးကစားနညျးတှေ နှငျ့ အမှုလိုကျ အကျရှငျ အခနျး လေးပါထညျ့ထားတဲ့( Comedy,Crime ,Gambling) ၃ခုလုံးပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။
ဒီTricky Master 1999 ဟာ ခြောငျနဲ့ဝေါငျကငျြးတို့ရဲ့ နောကျဆုံး ဇာတျကားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ဒီကာပွီးကထဲကခြောငျဟာ ကိုယျတိုငျရိုကျကူး၊သရုပျဆောငျလာပွီး အခုထိလက်မတှဲတော့ပါဘူး။ အပွငျမှာ တှဆေုံ့မှုလဲ အလှနျနညျးပါးပွီး အဆကျသှယျပွတျခဲ့တယျလို့ interviewတဈခုမှာ ဖတျရပါတယျ။
Wong Jing သညျ ယခု အသကျ ၆၄ နှဈဝနျးကငျြရှိတဲ့ Producer,Director, Presenter, Actor တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ ။သူသညျ ယခုခြိနျထိ ဇာတျကားပေါငျး ခနျ့မှနျးခြေ ၁၇၅ ကားကို ရိုကျကူး၊ထုတျလုပျ ခဲ့ ပွီးသူကိုယျတိုငျလဲ တခြို့ကားတှမှော တတျနိုငျသလောကျ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
ဒီကားတှငျ လညျး Wong Jing သညျ ဗီလိနျ နရော ၌ ပါဝငျ သရုပျဆောငျ ထား တာ ကို မွငျရမှာဖွဈပါတယျ။ (ဖဲ ယှဉျ က စားသညျ့ ခပျဝ ဝ လူဆိုး ဂိုဏျးဆရာကွီးသညျ ဒီကားရဲ့ ဒါရိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။)
သူကိုယျတိုငျရိုကျပွီး သူကိုယျတိုငျ ဝငျ သရုပျဆောငျထားတာ မြိုး ပေါ့ ။ဒါဟာဒီကားမှမဟုတျပါဘူး။Chow ရဲ့ ကားတိုငျးလိုလိုမှာ လူဆိုး ဗီလိနျအနဖွေငျ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာ ကို သတိထားတှနေို့ငျပါတယျ။
ဒီကားကို တစ်ချို့ က Tricky Brains ဆိုတဲ့ ကား နဲ့ ရောနေတတ် ကြပါတယ်။သဘောတရားတူပေမယ့် ဇာတ် လမ်းက မတူပါဖူး။Tricky ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် လိမ်ညာမှု ၊လှည့်စားမှု ဆိုတဲ့စကားလုံးအရ နှစ်ကားလုံးက လိမ်ညာလှည့်စားတဲ့ဇာတ် ကားတွေပါ။
၁၉၉၉ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၅ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့ ပြီးBox Office ကတော့ HKD ၁၉ မီလီယံကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။Imdb Rating လဲ 5.8 ရရှိထားတဲ့ ၂၀၀၀ မပြည့်မှီ ချောင်ရဲ့နောက်ဆုံးကားလို့ဆိုရပါမယ်။၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကျော်ပြီးကထဲက Chow ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေအလွန်နည်းပါတယ်။
KungFu Hustle , Shaloin Soccer, Cj7စတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ ပဲ ချောင်ဟာ အကွက်စိတ်ပါဝင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင် နည်းပါးလာပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်အတိုင်းTricky Master (လှည့်စားဆရာကြီး) Chow ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Nick Cheung ( နစ် ချန်း ) ဆိုတဲ့ မင်းသား တစ်ယောက် နဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။-ထောင်ကထွက်လာတယ့် လှည့်စားဘုရင် ချောင်။(Chow)
-အမှု လိုက်ရာမှာ ကျွမ်း ကျင်မှု မရှိ ပဲ အလွဲ အမှား ဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ယောက်ဖ(ရဲဝန်ထမ်း)။(Nick cheung)-ယောက်ဖရဲ့ အမှု တွေ ကို လှည့်စားနည်းပညာတွေနဲ့ ဘယ်လို အကူညီပေးမယ်? လှည့်စားနည်းတွေဘယ်လိုသုံးပြီး ဘယ်လို အနိုင်ယူ မယ်ဆိုတာတွေကို ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီကားမှာဆိုရင် ချောင်ရဲ့ Tricky Brains ကားထဲကလို လှည့်စားတတွကို တွေ့ရမယ် ။Gamblers Series ထဲကလို ဖဲ လောင်းကစားနည်းတွေ နှင့် အမှုလိုက် အက်ရှင် အခန်း လေးပါထည့်ထားတဲ့( Comedy,Crime ,Gambling) ၃ခုလုံးပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။
ဒီTricky Master 1999 ဟာ ချောင်နဲ့ဝေါင်ကျင်းတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကာပြီးကထဲကချောင်ဟာ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူး၊သရုပ်ဆောင်လာပြီး အခုထိလက္မတွဲတော့ပါဘူး။ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံမှုလဲ အလွန်နည်းပါးပြီး အဆက်သွယ်ပြတ်ခဲ့တယ်လို့ interviewတစ်ခုမှာ ဖတ်ရပါတယ်။
Wong Jing သည် ယခု အသက် ၆၄ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Producer,Director, Presenter, Actor တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။သူသည် ယခုချိန်ထိ ဇာတ်ကားပေါင်း ခန့်မှန်းချေ ၁၇၅ ကားကို ရိုက်ကူး၊ထုတ်လုပ် ခဲ့ ပြီးသူကိုယ်တိုင်လဲ တချို့ကားတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီကားတွင် လည်း Wong Jing သည် ဗီလိန် နေရာ ၌ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထား တာ ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဖဲ ယှဉ် က စားသည့် ခပ်ဝ ဝ လူဆိုး ဂိုဏ်းဆရာကြီးသည် ဒီကားရဲ့ ဒါရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။)
သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင် ဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာ မျိုး ပေါ့ ။ဒါဟာဒီကားမှမဟုတ်ပါဘူး။Chow ရဲ့ ကားတိုင်းလိုလိုမှာ လူဆိုး ဗီလိန်အနေဖြင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ကို သတိထားတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Cheating Wife – Link 2
Star Wars I : The Phantom Menace (1999)